ओलीले प्रचण्ड र बाबुरामलाई हत्कडी लगाउन्, अनसन तोड्छु- गंगामाया (भिडियो) – Halkhabar kura
१५ माघ २०७७, बिहीबार १४:५५
ओलीले प्रचण्ड र बाबुरामलाई हत्कडी लगाउन्, अनसन तोड्छु- गंगामाया (भिडियो)
एक वृद्धा, अस्पतालको बेडबाट छोराको हत्याराहरुलाई कारबाहीको माग गरिरहेकी छिन् ।
पति नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएपछि गंगामाया अधिकारी अहिले एक्लै परेकी छिन् तर उनले न्यायको माग परित्याग गरेकी छैनन् ।
नेपालबाट हजारौं किलोमिटर परको देशमा कहिँ कतै कुनै अनसनकारीको मृत्यु भयो भने नेपालमा मानवअधिकारबारे बहस नै छेडिन्छ।
तर पाँच वर्षअघि अनसनमै नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भयो, अहिले उनकी पत्नी गंगामाया पनि न्याय नपाए प्राण त्याग गर्छु भनिरहेकी छिन् ।
के यो देशले गंगामायालाई न्याय दिन सक्ला ? थप जानकारीका लागि तलको भिडियो हेर्नुहोस् ।
यो पनि पढ्नुस सुर्खेतमा जग्गाधनीलाई पत्तै नदिई जग्गा बिक्री
जग्गा धनीलाई पत्तै नदिइ जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतको जग्गा खरिद बिक्री भएको छ । जग्गा बिक्रीपछि मालपोत कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारी, जग्गा कारोबारी र लेखनदासविरुद्ध जग्गा धनीले उजुरी दिएका छन् । प्रहरीले वडाध्यक्षसहित ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका -६ का सौगता रावतको नाममा रहेको ६ कठ्ठा जग्गामध्ये कित्ताकाट गरि चार कठ्ठा जग्गा गत असार ८ गते बिक्री गरिएको छ । रावतले जग्गाको ट्रेस नक्सा लिन नापी कार्यालय पुगेपछि आफ्नो जग्गा अरुकै नाममा पुगेको थाहा पाए । त्यसपछि मालपोत कार्यालयमा पुगेर हेर्दा आफ्नो जग्गा अरुले नै बिक्री गरिदिएको पुष्टि भयो ।
कित्ताकाट गरि अन्य व्यक्तिको नाममा गएको भन्ने थाहा लागे लगत्तै मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत नायब सुब्बा विश्वरुप सावद र जग्गा कारोवारी सन्तोष ठाकुरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दर्ता गरिएको छ । मालपोत कार्यालय सुर्खेतले भने जग्गा धनी स्वयं उपस्थिति भएको जनाएको छ । जग्गा धनी रावत आफै आएर डिजिटल थम र राजीनामामा सही छाप गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतको भनाइ छ । जग्गा नियमसंगत कागजात रितपूर्वक भएको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ ।
प्रहरीले जग्गा खरिद विक्री प्रकरणमा हस्ताक्षर गरेको वडा कार्यालय, मालापोत कार्यालय र नापी शाखाका कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक छानविन र अनुसन्धानका गरि रहेको छ । जग्गा कारोवारीका एजेन्ट सन्तोष ठाकुरले भने जग्गा धनी रावतसँग आफ्ना आर्थिक लोनदेनको कारोवार बिग्रेका कारण फसाउने नियतले मुद्धा दिएको जनाएका छन् । उनले जग्गा खरिदविक्री गर्दा देखिनै रावत उपस्थित भएको र राजीनाममा उनकै सहि छाप भएको बताए । प्रहरीले राजीनामामा भएको सहि छापको परिक्षण गर्न पठाएको जनाएको छ ।
Previous बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपविरुद्ध नबोल्ने प्रचण्ड, नेपाल र ओली या कांग्रेस सबैको साझा एजेन्डा हो ! (भिडियो)
Next ७० करोड खानेहरूलाई उसले खाएकै होइन भन्दै जोगाउने को हो ? ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न !